ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction အပူ / Induction အပူအပူလျှပ်ကူးဆီဘွိုင်လာ
Categories: လျှပ်စစ်သံလိုက်သော induction heater, induction အပူ, induction အပူဘွိုင်လာ Tags: induction oil boiler ကိုဝယ်ပါ။, induction ဘွိုင်လာ, induction အရည်ဘွိုင်လာ, induction အပူလျှပ်ကူးဆီဂျင်နရေတာ, induction အပူဆီဘွိုင်လာ, induction အပူလွှဲပြောင်းဆီဘွိုင်လာ, Induction အပူအပူလျှပ်ကူးဆီဘွိုင်လာ, induction ဆီဘွိုင်လာ, induction ဆီဘွိုင်လာစျေးနှုန်း, induction ဆီအပူပေးဘွိုင်လာ, induction အပူလျှပ်ကူးဆီဘွိုင်လာ
Electromagnetic Induction အပူပေး အပူလျှပ်ကူးဆီ ဘွိုင်လာ-Induction Fluid Boiler-Induction Fluid Heating Generator
Induction အပူအပူလျှပ်ကူးဆီ ဘွိုင်လာသည် ဘေးကင်းသော၊ စွမ်းအင်ချွေတာသော၊ ဖိအားနည်းပြီး အပူချိန်မြင့်သော အပူစွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော လျှပ်စစ်သံလိုက် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အပူအရင်းအမြစ်အဖြစ် လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်ကူးမှုအား၊ အပူသယ်ဆောင်သူအဖြစ် အပူလျှပ်ကူးဆီအားအသုံးပြုကာ အပူပေးရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများထံသို့ အပူလျှပ်ကူးဆီအရည်ကို ပို့ဆောင်ရန်အတွက် အပူပေးထားသောဆီပူစုပ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အပူစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများသည် ပြင်းထန်သောအပူစွမ်းအင်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်လွှဲပြောင်းမှုရရှိရန် လည်ပတ်နေသောအပူကွင်းပုံစံဖြစ်ပြီး အပူ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ရိုးရှင်းသော လည်ပတ်မှု၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သေးငယ်သော ခြေရာလက်ရာများဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အထူးအပူပေးစက်များ ပါရှိသည်။
စံသတ်မှတ်ချက်များ DWOB-80 DWOB-100 DWOB-150 DWOB-300 DWOB-600
ဒီဇိုင်းဖိအား (MPa) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
အလုပ်လုပ်ဖိအား (MPa) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းအား (KW) 80 100 150 300 600
လက်ရှိအဆင့် (က) 120 150 225 450 900
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (V) 380 380 380 380 380
စေ့စပ်သေချာခြင်း 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်±
အပူချိန်အကွာအဝေး (℃) 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350
အပူထိရောက်မှု 98% 98% 98% 98% 98%
ခေါင်းကိုစုပ် 25 / 38 25 / 40 25 / 40 50 / 50 55 / 30
pump စီးဆင်းမှု 40 40 40 50 / 60 100
မော်တော်ပါဝါ 5.5 5.5 / 7.5 20 21 22
စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်- Induction အပူအပူလျှပ်ကူးဆီဘွိုင်လာ
1. အစိမ်းရောင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း- ရိုးရာဘွိုင်လာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူပေးနေစဉ်အတွင်း ညစ်ညမ်းစေသော အရာများကို မလောင်ကျွမ်းစေပါ။ လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေး၊ စိမ်းလန်းသောပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် ကာဗွန်နည်းသောအသက်တာအတွက် အမျိုးသားရေရှည်စီမံကိန်းနှင့်အညီ အပြည့်အဝဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
2. စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။ လျှပ်စစ်အပူပေးပြွန်ဘွိုင်လာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းဘွိုင်လာသည် စွမ်းအင်၏ 20% မှ 30% ကို သက်သာစေပါသည်။ ဘွိုင်လာမီးဖိုကိုယ်ထည်ကို တိုက်ရိုက်အပူပေးရန်အတွက် ကြိမ်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်၏ တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသော လက်ရှိဖြစ်စဉ်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏သံလိုက်ခံနိုင်ရည်သည် သေးငယ်ပြီး 95% ထက်ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်သော အပူစွမ်းအင်မြင့်မားသည်။
3. တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။ ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ကျောက်မီးသွေးသုံးနှင့် ဓာတ်ငွေ့သုံး ဘွိုင်လာများထက် သုံးဆမှ လေးဆဖြစ်သည်။ ရိုးရာဘွိုင်လာများသည် လောင်ကျွမ်းမှုမှ ထုတ်ပေးသော အပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် မီးဖို၏ကိုယ်ထည်ကို ဆက်လက်ပျက်စီးစေပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မီးဖိုလည်း ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘွိုင်လာသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူပေးသည့်နိယာမကို အသုံးပြု၍ အမည်မသိ၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိပါ။
4. အလိုအလျောက်စနစ်၏ မြင့်မားသောအဆင့်- ပရိုဂရမ်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အလိုအလျောက်စနစ်ထိန်းချုပ်မှု PLC နည်းပညာ၊ MCU တစ်ခုတည်းချစ်ပ်နည်းပညာ၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့် ရုပ်ရှင်နည်းပညာကို အသုံးပြုပါ။ အဆိုပါနည်းပညာများ၏လွယ်ကူမှု၏ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကို enable လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းရေနံဘွိုင်လာ ကိုယ်တိုင်တာဝန်မရှိဘဲ။
အဆိုပါ လျှပ်စစ်သံလိုက် induction အပူလျှပ်ကူးဆီဘွိုင်လာ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော၊ မြန်ဆန်သောအပူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်းစသဖြင့် ကွန်ပြူတာသည် အပူချိန်ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ပြီး ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုအပူချိန်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။